चुनावका केहि सन्देशहरु: वामशक्ति संग भरोसा, कांग्रेसलाई सुध्रिने मौका – Vision Khabar
चुनावका केहि सन्देशहरु: वामशक्ति संग भरोसा, कांग्रेसलाई सुध्रिने मौका
। २९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:४३ मा प्रकाशित
नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप भएको पहिलो निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । यस आलेख तयार पार्दा सम्म प्रत्यक्ष तर्फको सबै परिणाम आईसकेको छ भने समानुपातिक तर्फको गणना चलिरहेको छ । घोषित परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा तर्फ वामगठबन्धन ११६, नेपाली कांग्रेस २३ र अन्य ३६ स्थानमा विजयी भएका छन् । त्यसै गरि प्रदेससभामा वामगठबन्धन २३९,नेपाली कांग्रेस ४५ र अन्य ४६ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
वाम गठबन्धनको यो अभूतपूर्व विजय पश्चात नेपालको राजनीति अब नयाँ कोर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसको बहुआयामिक पक्षलाई बस्तुनिष्ठ तवरले समिक्षा गर्न जरुरी छ । बाम गठबन्धनको पक्षमा देखिएको यो परिणाम पार्टीहरुको लोकप्रीयता भन्दा एजेण्डाहरु प्रतिको आकर्षण ज्यादा देखिन्छ । जनताको राजनीनिक स्थायीत्व प्रति उत्कठ चाहाना र वामशक्ति संगको आशा एवं भरोसाको वीचमा फ्युजन भएर यो परिणाम आएको छ । ती एजेण्डाबाट विमुख हुँदाको क्षण जनमत यही ठाउँमा रहदैन भन्ने कटु सत्य गठबन्धनका दलहरुले बुझ्नै पर्छ । यसर्थ केवल पाँच बर्षको लागि होइन, सम्पूर्ण भविष्य सोचेर काम गर्नु नै यस जितको सार्थकता संग जोडिएको छ । तसर्थ तपशिलका पक्षहरुलाई हरक्षण हेक्का राख्न जरुरी छ ।
हो, हिजो धेरै संसदहरु बने, ९÷९ महिनामा सरकारहरु फेरिए, प्रधानमन्त्रीका अनुहार फेरिए तर देशको मुहार फेरिन सकेन । त्यसक्रममा कहिले काँहि केहि गर्ने सरकार आए तर तीनहरुको आयु नौ महिना भन्दा धेरै जान सकेन । सधै अस्थायी प्रकृतिका अर्थात् कामचलाउ सरकार मात्र बने । यी सबै दृश्यबाट निसासिएका जनताले यसपटक पाँच बर्षे पुरै आयु भएको स्थिर सरकार बनाउनको लागि यस्तो फैसला गरेका छन् । केवल आयु मात्र भएर आफै समृद्धि आउँदैन, स्पष्ट भिजन, मिसन र एक्सन भएको सरकारनै जनताको माग हो । यो संभावना वामगठबन्धन संग मात्र देखेकोले जनताले यीनैलाई रोजेका हुन् ।
वामशक्ति संग ठूलो भरोसा
राणाशाही ढालेका तीनै जनताले पटक पटक कांग्रेसलाई अवसर दिए । राजतन्त्रको अन्त्य गर्न तीनै जनता एक भएर उठे । देशलाई युद्धको विभिषिकाबाट झिकि शान्ति स्थापना गर्न यीनै जनताले दवाव दिए । आज उनै जनताले असाधारण परिणाम दिंदै वामशक्तिलाई देशभर निर्वाचित गरेका छन् । ‘हामीलाई लामो समय काम गर्न दिइएन’ भन्दै एकपटक मौका दिन जनतको विचमा उनीहरुले गरेको अपीललाई जनताले आत्मसाथ गरेका छन् । छोटो समय सरकार चलाउँदा केहि छनक दिएका उनीहरुले लामो समय सरकार चलाउन पाए भने केहि गर्छन् कि? भनेर जनताले निकै ठूलो भरोसा राखेका छन् । त्यो भरोसालाई यथार्थमा बदल्ने चुनौती नै बाम गठबन्धन सामुको मुख्य चुनौती हो । ‘जुन …आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उक्तिलाई गलत सावित गर्ने र जनतामा आशा जगाउने अविभारा बाम गठबन्धनसंग छ ।
विपी विचारधारा लत्याउँदै उपयोगिता र तदर्थवादमा रुपान्तरण भएको कांग्रेस भित्र गम्भिर सैद्धान्तिक वहसको माग यस परिणामको अर्को महत्पुर्ण पाटो हो । संविधानमा भएको समाजवादलाई अधिनायकवाद देख्ने उसको दिवालिया चिन्तन त्यही विचार शुन्य अवस्थाको उपज थियो । गिरिजा देखि शुशिल सम्म ‘कोइराला गन्ध’ले टिकेको कांग्रेस, आज त्यही गन्ध पनि नभएर उजाड रुखमा सिमित हुन पुगेको छ । श्ुशिलाकार्की महाअभियोग प्रकरण र आइजिपी काण्डले उसंग भएको लोकतन्त्रको फ्लेवर माथि पनि धावा वोल्योे । यसरी बाटो विराएको यात्री र सीयो नभएको कम्पास जस्तो देखिएको कांग्रेसलाई आमुल रुपमै सच्चिन यस परिणामले दवाव दिएको छ । हेरौं, अब कांग्रेसले कसरी पाइला सार्छ ? रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्छ वा प्रतिशोधको मार्ग समात्छ ? पुरानै रवैया दोह¥याउँछ वा ‘प्रतिक्षाको सरकार’ को आशा जगाउँछ ।
दुई दलिय प्रतिस्पर्धाको माग
गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका विभिन्न रुपहरु नदेखिएका होइनन् । एमाले–राप्रपा, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ठाउँ ठाउँमा बनेका थिए । एकाध बाहेक ती तालमेलले सहि परिणाम दिन सकेनन् । किनकी ती सबै गठबन्धन विजातीय खालका थिए । तर यसपटकको गठबन्धन अपवाद वाहेक देशभर परिणाममुखी बन्यो । स्वभाविक प्रकृतिको यस्तो गठबन्धनलाई जनताले पनि रुचाएको र त्यसबाट उभार आएको देखियो । यसको अर्थ अब पार्टीहरुका खुद्रा दोकानहरु बन्द गरेर प्रकृति मिल्नेहरु एक होऔ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ । यो अन्ततः दुई पार्टी पद्धतीमा जान जनताले गरेको आदेश हो । यस मर्मलाई वामगठबन्धका सदस्य दलहरुले गहिरो गरि आत्मसाथ गरुन् । एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने पूर्ववाचालाई उनीहरुले छिटो पुरा गरुन् । त्यसले लोकतन्त्र झन बलियो बनाउने छ । पार्टीहरु च्याउ उम्रे जस्तै उम्रनुले मात्र असली लोकतन्त्रको मापन हुन सक्दैन ।
आशालाग्दो अन्तिम विकल्प
कम्युनिष्टहरु फुट्न मात्रै जानेका छन् कहिल्यै मिल्न सक्दैनन् भन्ने बारम्बारको घोचपेचको एउटा उत्तर यसपटक आएको छ । अब यसलाई एकतामा बदलेर पूर्ण जवाफ दिन कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा वामशक्ति मिल्दा केहि हुन्छ कि ? भन्ने यो नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने सच्याई गहिरो गरि बुझ्नै पर्छ । नेपाली धर्तिमा प्रयोग हुन वाँकी रहेको विकल्प ठानेर यससंग सिंगो देश र समग्र जनताको भविश्य जोडीएको अनुभूति हुने गरि काम गर्नु नै यस जीतको मूल मर्मलाई पक्डनु हो । जनतासंग यो भन्दा धेरै अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । अब हरेक जनताको हातमा उपलब्धि र देशको समृद्धिको युग शुरु गर्नै पर्छ ।
सिद्धान्तमा होइन, ग्राफमा देखाउ
यो समय राजनितिक अधिकार प्राप्तिको लडाई सकिएर समृद्धिको युग शुरुवात भएको समय हो । त्यसैल, अबको उपलब्धि सैद्धान्तिक खालको होइन, हरेक क्षेत्रमा ग्राफबाट प्रष्ट देखिने खालको हुनु पर्छ । एक बर्षे, तीन बर्षे, पाँच बर्षे र दीर्धकालीन योजनाहरु निर्माण गरि आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरि अगाडी बढाउनै पर्छ । हरेक बर्ष आयात कतिले घट्दैछ ? निर्यात कतिले बढ्दैछ ? विद्युत उत्पादन कति मेघावाटले बढ्यो ? रेल मार्गको काम कति पुरा भयो ? राष्ट्रिय राजमार्गहरु कति किमी बने ? खानी उत्खनन कति ठाउँमा शुरु भयो ? कति प्राविधक शिक्षालयहरु कहाँ थपिए ? हरेक बर्ष रोजगारी कति प्रतिशतले बढ्यो ? विदेश जाने युवाहरुको संख्या कति घट्यो ? कतिबटा उद्योगहरु थपिए ? कति जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाए ? पर्यटकहरु कति गुण भित्रिए ? नेपालमै केहि गर्न सकिन्छ भनेर कति विशेषज्ञहरु फेरी स्वदेश फर्के ? कुन कुन ठूला परियोजनामा नेपालका कति घर धुरीको लगानी छ ? कुन क्षेत्रबाट कहाँ कति लगानी छ ? प्रति व्यक्ति आय कति बर्षमा कति पुग्यो ? गरिवी कति प्रतिशतले घट्यो ? भ्रष्टाचार कति प्रतिशतले घट्यो ? सुशासनको प्रत्याभूति कति जनताले गर्न पाए ? मानव विकासको स्थापित मानकहरुमा नेपालको स्थान कहा रह्यो ? यस्ता प्रश्नहरुको ठोस उत्तर आम जनताले जान्न चाहेका छन् । सुनिने मात्र होइन देखिने विकास र कल्पनाको मात्र होइन आफ्नै जिवनकालमा समृद्धि नै यस निर्वाचनको केन्द्रीय प्रश्न हो । ‘अबको अर्जुन दृष्टि, नेपाल र नेपालीको समृद्धि’ को कार्यान्वयनमा जुट्नु नै वास्तविक जनमतलाई बुझ्नु हो ।
त्यसैले, को के हुने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र पार्टी अध्यक्ष को को हुने ? यस्तो गौण सवालमा धेरै रुमलिने अब समय छैन । फराकिलो सोचाई राख्दा यसको व्यवस्थापन गर्न कुनै कठिनाई छैन । आजका प्रधान सवालहरुलाई ओझेलमा पारेर यस्ता गौण र प्राविधिक पक्षमा धेरै समय बर्वाद नगरौं । चुनावले दिएका यी सन्देशहरुलाई गहिरो गरि आत्मसाथ गरौं ।
लेखक अनेरास्ववियूका केन्द्रिय कमिटि उपाध्यक्ष हुन्